Umgaqo wesithathu: into ekufuneka uyazi ukuyazi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UManuel Ramirez | | Ukufota, Ukuphefumlelwa
Akufanele iphazanyiswe nolawulo lwesithathu sezinto ezinxulumene nehlabathi lokuntywila, kunye nexesha elifanayo, kodwa kugxilwe kumbutho wezomkhosi. Apha Siya kwindawo ephambili yale bhulogi, ezinxulumene noyilo nayo yonke into enxulumene nehlabathi lobugcisa kububanzi balo bonke; Sikwadlala kunye neenkqubo zokufunda, iinkqubo, kunye neendlela ezahlukeneyo zokubonelela ngento enkulu ukuba yoyilo.
Ulawulo lwesithathu nje ngokuba sidibene kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ngoBume beGolide kunye nokusebenzisa irula ukufumana eyona "intle" umlinganiselo wamehlo wombukeli yi Isikhokelo esisebenza kwinkqubo yokwenza imifanekiso ebonakalayoEziyilo, iifilimu, imizobo kunye neefoto Ngale ndlela, siya kuba nakho ukuba nesiseko apho sibeka khona izinto ezahlukeneyo ukuze zibekwe ngobulumko kuloo migca kunye neendlela zayo.
1 Ulawulo lwesithathu
2 Ezinye iinkcukacha kufuneka ziqwalaselwe xa ubhala
3 Ithini imbali yolawulo lwesithathu?
4 Ukuziqhelanisa kwenza ubuchule
5 Ulawulo lwesithathu esithombeni
Nabani na okhusela lo mthetho kwisithathu, uhlala ebhekisa kuwo njenge indlela entle yokulungelelanisa isihloko kwezo ndawo zikwaziyo ukudala uxinzelelo ngakumbi, amandla kunye nomdla ekubunjweni kunoko kugxila kugxilwe kumxholo.
Omnye ukufota kusebenza njengomzekelo obalaseleyo wokuchaza ngokukhawuleza ukuqala kwalo mgaqo. Sinokutshona kwelanga emfanekisweni kunye nomthi oya kuba sisihloko esiphambili somfanekiso, kodwa loo nto ishiywe incinci ngasekunene ukufezekisa ukwenziwa kwemvisiswano enkulu, kunokuba bekuphakathi embindini wokubanjwa.
El I-horizon ihleli kumgca ojikelezayo ohlula isahlulo sesithathu esezantsi ifoto evela kumacala amabini aphezulu. Umthi usekwe kwimidla yemigca emibini, enokuthiwa yindawo yomdla womfanekiso. Nangona kufuneka kuthiwe eli nqaku akufuneki lichukumise nayiphi na kule migca ukuthatha ithuba lolawulo lwesithathu.
Enye inkcukacha lelona candelo liqaqambileyo esibhakabhakeni kufutshane nomphandle, apho ilanga liza kuwela khona, kodwa ayisi ngqo komnye wale migca, nangona iwela kufutshane nonqamlezo imigca emibini, yanele ukuba sikwazi ukuthetha ngalo mgaqo kwaye uwuqonde ngcono ngokubonakalayo.
Singatsho ukuba lo mthetho iqinisekisa ukuba siyayiqonda indlela engcono yokwenza umfanekiso obonakalayo. Endaweni yokugxila kumxholo, yishiye ecaleni kancinci, ukuze ezinye izinto zithathe inxaxheba encinci kwaye zikwazi ukuhambelana ngendlela yokuba ukubanjwa okanye uyilo luthathe ingqibelelo enkulu. Iifoto zepanoriki zomhlaba zibonakalisa oku kulungileyo xa sisebenzisa umthetho wesithathu kwisithathu.
Kuya kufuneka ujonge uninzi lweeapps zekhamera ye-smartphone, ukuze uqonde ukuba thina vumela ukubeka igridi yesithathu kwisithathu ukuze ube nesikhokelo ukwenza izinto zibe lula kuthi xa ufota.
Ezinye iinkcukacha kufuneka ziqwalaselwe xa ubhala
Enye ingongoma ephambili yile ukulungelelanisa isihloko kwimigca yesikhokelo nakwiindawo zabo zokudibana, ukushiya ihorizon ephezulu okanye esemazantsi. Sishiya isibini kwisithathu esibhakabhakeni, okanye isinye kwisithathu esibhakabhakeni xa siqulunqa umfanekiso wepanoramic yomhlaba.
Esona sizathu siphambili sobukho bolawulo lwesithathu kukuba susa umxholo kwiziko, okanye uthintele i-horizon ukwahlula umfanekiso kubini ngokulinganayo. Ngale nto engqondweni, sinokuphucula ngokukhawuleza kulo mgaqo kwaye siwusebenzise kwimisebenzi engapheliyo kuyo yonke into enokuyenza yoyilo, ubugcisa, ukufota, kunye nokunye. Kwakhona, sigcina lo mthetho engqondweni, sinokujonga kwimiboniso bhanyabhanya yeefilimu ezininzi ezithathela ingqalelo isithathu ngenye indlela.
Ukuba kunokwenzeka ukuba sifote umntu, Into eqhelekileyo kukulungelelanisa indawo ephezulu yomzimba kunye nelayini ethe nkqo kunye namehlo omntu kumgca othe tye.
Ithini imbali yolawulo lwesithathu?
Ngaphakathi Kufuneka siye ku-1797 ukudibana noJohn Thomas Smith. Kwincwadi yakhe ethi "Remarks on Rural Scenery", le ndoda icaphula incwadi ebhalwe ngu Sir Joshua Reynolds, apho axoxa amagama amatsha anento yokwenza nokukhanya okumnyama kwipeyinti. Kulapha apho uSmith aqala khona ngombono wolawulo lwesithathu ukuze namhlanje kuqheleke kwiintlobo ezininzi zemisebenzi.
Singadlulela kwifilosofi ngokuya kumagama athethwe nguReynolds apho uthetha ngezibane ezibini ezahlukileyo nezilinganayo ezingafanelekanga ukuvela kumfanekiso omnye. Yintoni ekufuneka ibalulekile kwaye ezinye "ziphantsi", zombini kubukhulu nakwidigri. Iindawo ezingalinganiyo kunye nezibalo zazo ziqondisa ngokulula ingqalelo ukusuka kwinxalenye ukuya kwinxalenye, ngelixa iinxalenye zembonakalo efanayo zinqunyanyisiwe ngendlela engaqhelekanga.
Ezinye izimvo ezithi Baqala ukukhulelwa ulawulo lwesithathu kwaye zisetyenziswa kakuhle ngamagcisa amaninzi. Umxholo osisiseko wobugcisa kunye nalowo kufuneka unikezwe ngokungathandabuzekiyo ukuze imisebenzi yethu ithathe enye intsingiselo, endaweni yokuya ngokungacwangciswanga okanye kuyilo olunokuvela kubugcisa bethu.
Ukuziqhelanisa kwenza ubuchule
Ukulandela esi siseko solawulo lwesithathu, sinako kulula ukuyilungiselela kule mihla yethu ukuze siqonde ukuba iifoto ukuba sithatha, baqala ukwandisa intsingiselo kwaye banakho ukuboleka ukubonisa imvisiswano enokubakho kuloo ndawo siyithathayo. Kancinci kancinci siza kuyiseka ngaphandle kokuqonda ukuba sisebenzisa lo mthetho kuninzi lwemisebenzi, ngakumbi xa sifuna ukushiya umxholo ngasemva kwaye siyeke ezinye izinto zikwazi ukunika intsingiselo ngakumbi.
Kuya kubonakala ngathi kusisiyatha ekuqaleni, kodwa ekuhambeni kwexesha siya kuyiqonda ngcono imeko yefilosofi kunye nemvisiswano ekhoyo kulo mthetho. Singaqonda kananjalo ukuba imigaqo yenziwe ukuba yaphulwe, kodwa makube njalo, inyani kukuba kukho amagcisa amaninzi asibonisayo ngobugcisa babo ukuba akunjalo. Singasoloko sizinika inkululeko yokudala ngokukhululekileyo, kodwa le migca ingasinceda ngamaxesha athile ukuba silubone olo luvo siludingayo kulwakhiwo lokugqibela. Zizixhobo, ekupheleni kosuku, esinazo esandleni sethu ukuze sikwazi ukusombulula zonke iintlobo zeengxaki, kwaye, ngaphezulu kwako konke, xa obona bugcisa bethu bobugcisa bungasincedisi.
Ulawulo lwesithathu esithombeni
Ngenxa yamandla amakhulu esinawo ezandleni zethu uninzi lwee-smartphones ezithi zithengise emarikeni, lo mthetho usisiseko umi njengowona uphambili wokubamba imifanekiso emihle. Kwiifoto zepanoramic, into eqhelekileyo kukubeka indawo phakathi embindini wolwakhiwo, njengoko besesitshilo ngaphambili kwimpazamo edla ngokwenziwa ngabantu abaninzi. Into ekufuneka uyenzile kukubeka ihorizon kwenye yemigca emibini ethe tyaba. Enye into ekufuneka uyiqwalasele kukubandakanya into enokuthi ithathe indawo esembindini wesithombe. Inokuba ngumthi ngaphezulu ukuyibeka kulawulo lwesithathu.
Sele sithethile abantu kufuneka babekwe ngaphandle kwelinye lamacala esakhelo. Oku kuvula indawo ebanzi kwaye kubonisa indawo engqongileyo yesifundo, esenza ukuba umfanekiso ube ngowobuhle obukhulu ukuba siyayazi indlela yokusebenzisa lo mthetho kakuhle. Kumzobo, iya kuba ngumgca othe tye wamehlo omntu obonisiweyo ekufuneka ubekwe komnye wemigca emibini yomlawuli.
Elinye iqhinga lokufota ukuba sijonga into ende kakhulu enokwahlulahlula umfanekiso kubini, kungcono yishukumise kancinci isiya kwelinye lamacala ukuze inganyatheli nakweyiphi na imigca nkqo kwaye ushiye, kwakhona, loo ndawo ivulekileyo eyenza iifoto "ziphefumle."
Kwiifoto ezinezifundo ezihambayo, Kuya kufuneka ujonge ngononophelo apho zihamba khona, ukushiya loo ndawo ivulekileyo ekwaziyo ukuzoba indlela eya kuyithatha ngokufanelekileyo kwaye ngaphandle kokuphazamiseka.
Njalo, siya kuba neenkqubo zokuhlela ukukwazi ukulima umfanekiso ukuhlangabezana nomgaqo wesithathu ngaphandle kweengxaki ezinkulu. Ezinye zeenkqubo ezaziwa kakhulu, ezinje ngeAdobe Photoshop kunye neLightroom, zinezixhobo ezifanelekileyo zokulima ukubeka umxholo ngokuchanekileyo kuyo yonke into ekuthethwe ngasentla kwaye ubonakalise eso siseko somgca.
Khumbula ukuba lo mgaqo uya kuhlala usebenza kuyo nayiphi na imeko, nokuba uyaphule ngobulumko nangobuchule, unako kukhokelela kwifoto evuselelayo enika ezinye izivamvo eyahlukileyo kwinto ebeya kuba yiyo ukuba besisebenzisa umthetho wesithathu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukufota » Umthetho wesithathu
Fjan ukuhambelana namanye amagama sitsho
Nanini na xa ndibona inqaku elinomdla ekwakhiweni, njengale, imizekelo iyasilela kum ... Oko kundikhokelela ekubeni ndizibuze ukuba ingaba uyawuqonda na umgaqo owuchazayo ...
Inqaku elilungileyo! Hayi kangako imizekelo!
Guqula isicatshulwa sibe ziigophe ukuthintela iimpazamo zokuprinta